Amanqaku- Ikhamera yokuhlola | Izisombululo ze-OMG
Udidi Archives: Amanqaku- Ikhamera yokuhlola
Isiphelo se-10 esiphezulu esifihliweyo serejista yezwi eyi-SPY yokuBeka iliso kuMlingane
Namhlanje kunzima ukufumana iqabane elithembekileyo elizibophelele kuwe. Nangona kunjalo, asinakubona ngamehlo engqondo ukuba iqabane lakho lithembekile kuwe okanye akunjalo. Ukuba ufuna ukwazi ukusebenzisa izixhobo ezilandelayo zokurekhoda ngelizwi ukutshata kwiqabane lakho kwaye ufumanise ukuba yinyani.
I-SPYV018-DLULA IKHODI YOKHUSELEKO KWI-SIM khadi
Sonke siyalwazi ulwimi kunye nendlela iqabane lakho elithetha ngayo libonisa kakhulu ukuba baphuma phi. Kodwa ukuqinisekisa oku, kufuneka uqiniseke ukuba uneliso kuso sonke isenzo esenziwa liqabane lakho kwaye unombono wendlela iqabane lakho elithetha ngayo kwanaxa ungekho. Ukulungiselela le njongo, i-SPYV018 sesona sixhobo siphambili ngaphandle kwamathandabuzo ngokuqinisekileyo. Ngoku, yenza ntoni le nto incinci? Inokurekhoda ilizwi kunye nokuthatha iividiyo zakho kwaye uzigcine kwikhadi le-SD ezinokuthi zonyuselwe phezulu kude kube yi-32gb! Ayisiyiyo loo nto kuphela kodwa iza nokungena kwamanzi ukuze nokuba iqabane lakho lihambe libe linye kwaye liyilahle. Akunyanzelekanga ukuba ukhathazeke kakhulu njengoko iyakwenza kanye emva kokuba uyikhuphe. Ungayibeka nakweyiphi na indlu indlu ukuba ibe neliso ngamehlo kulo mntu usebenzileyo ngelixa uxakekile emsebenzini ngeenjongo eziqhelekileyo njengokuqinisekisa ukuba abayityi into eyonzakalisayo okanye benze nantoni na enokubenza babe nengxaki !
I-SPYV022-ISIBHENGEZO SAMANDLA WOKUGQIBELA:
Ngesiqhelo sale mihla ukuba ukhule uhambele phambili ngakumbi, kuya kuba nzima ukugcina iliso kubantwana bakho okanye kumthandi wakho kwaye uqiniseke ukuba abaphenjelelwa yinto okanye umntu onokonakalisa isimilo sabo okanye ababe kuwe. . Kuya kufuneka uqiniseke ukuba bahlala ngaphakathi komgca wokubonwa kwakho lonke ixesha lokuhlala bezolile ukuba basezandleni ezilungileyo, kodwa. Kuthekani ukuba uyabavumela babe nenkululeko epheleleyo kodwa uqiniseke ukuba basezandleni ezilungileyo? I-SPYV022 yinto ekuphela kwayo ke, le yinto yamandla okubhaliweyo kwilizwi lokushicilela isixhobo. Ibuyiswa ibhetri enokuqhubeka ngokurekhoda ukuya kwiiyure ze600 ngqo ngaphandle kokumisa umzuzwana. Ayisiyiyo loo nto kuphela kodwa ikwaqinisekisa ngomgangatho opheleleyo njengoko le fowuni inokurekhoda ukuya kwisantya se-192kbps ukwenza okanye ukukhawuleza ukwenza ukufikelela ekubhaleni kwimemori eyakhelwe-ngaphakathi ye-Ilya 32gb. Kulungile, awuzukuya phambili kwaye ujonge ikhadi le-SD emva kokuthenga le mveliso nokuba!
I-SPYV027 - ISIQINISEKISO SEVOTYILEYO:
Ngoku, uyakuthini ukuba ungumntu ongafuniyo ukuya kwizinto ezi-pesky njengokuchazwa phaya kumanqaku kuphela okugcina iliso lakho kumthandayo? Ukuba kunjalo kwi-SPYV027 yinto nje kuwe. Ungasibeka esi sixhobo sincinci kuyo nayiphi na indawo yendlu ukuba ibe ligumbi, okanye indawo kawonkewonke kwaye ubandulele naphi na apho ufuna khona kuloo ndawo nangoku uqinisekisa ukuba une-engile nganye kwiqabane lakho kwaye uyazi ngokuziphatha kwabo abanye abantu okanye abantu abadibanisa nabo! Le gajethi inokurekhoda ukuya kuthi ga kwiiyure ze-600 ngqo ngaphandle kokufuna nantoni na kwaye wenze okanye ubengene kuyo yonke loo vidiyo kwimizuzwana nje. Iza kunye nememori eyakhelwe-ngaphakathi ye-8Gb qinisekisa ukuba unexabiso nje elifunekayo lokugcina onokuyicela xa uyithengile ngaphandle le mveliso. Yiyo loo nto akufuneki ukhathazeke malunga nokwenza lo mfo okanye intombazana ibandakanyeke kwizandla ezingalunganga nangokuba amehlo akho engaziboni izinto ezinokubakho, esi sixhobo siza kuqinisekisa ukuba awukwazi ukuva kwaye wazi nokuba bangene yintoni ngelixa igcinwe ifihliwe ngenxa yobungakanani bayo be-compact!
I-SPYV015-irejista ye-MINI KEYCHAIN ​​VOICE:
Ukuba uziva ngathi umthandi wakho uwele ezandleni ezingalunganga okanye uthandabuze ukuba ngandlel 'ithile indlela oziphatha ngayo ibonakala iyabacaphukisa okanye ukuba baziva ngathi bayabandakanyeka nabantu, akufuneki babekhona. Ke ungakhathazeki kwakhona, le gajethi iyigubungela ngokuthe ngqo njengoko inokwenzeka. I-SPYV015 sisishicileli sezwi esinegama elincinci elinokuphinda ubanike izipho kwiqabane lakho okanye nakubani na omfunayo kwaye abe nokuva okusisigxina kuyo nayiphi na into abayithethayo okanye abangaphakathi kuyo. Wonke umntu unemoto kwezi ntsuku ngokufanayo akufuneki ibe yingxaki kubo ukuba babe nale nto kuwe, ngokusebenzisa le gajethi unokuba nengqondo egqibeleleyo yokuba ngubani lo mntu uhleli naye, qhagamshela kwaye luhlobo luni lokuziphatha abalugcinayo nabanye abantu naphi na xa bengekho. Esi sixhobo siza sipakishwe ngebhetri engaphezulu kweeyure ze-28 ukukuqinisekisa ukuba ungazikhathazi ngayo nantoni na nangona uye wavumela i-Keychain ukuba ihlale iiyure okanye ukuba umntu omthandayo uphumile ngaphandle kwemoto apho i-Keychain ikhoyo kancinane. kancinci. Inokuhlawuliswa ngexesha lokukhanyisa ngokukhawuleza kwe-1 iyure, ke akufuneki ukuba unexhala lokufumana iziseko zayo ngalo lonke ixesha!
I-SPYV003 - ISIQINISEKISO SEZITHUBA ZESITHUYA:
Kuzo zonke iirekodi esizibonisile ngasentla, le inokuba yeyona ikhethekileyo ngenxa yobungakanani bayo becompact ngokumangalisayo kunye nenani elimangalisayo lokugcina ixesha libhetri ngaphandle kokuma kokurekhoda kwakho. Kulungile, i-SPYV003 iza nexesha lokurekhoda ukuya kuthi ga kwiiyure ze-280 ngqo ngaphandle kokuphumla, ukuze uqiniseke ukuba nabani na onaleli fowuni usenzela iinjongo zokhuseleko okanye ukubona indlela abaqhuba ngayo nabanye abantu, Izenzo abazibandakanyayo kunye nokunye. Akukho mfuneko yokuba babe nexhala malunga nokuhlawula ngalo lonke ixesha! Ayisiyiyo leya kuphela kodwa kwanaxa esi sixhobo sixhunyiwe ekubeni sis charger usengayisebenzisa ukurekhoda iividiyo zakho kwaye uqinisekise ukuba uneliso okanye i-angle kuyo yonke into eyenzekayo kwibala. Ikwa USB kwakhona ukuba ungakhathazeki malunga nokulahleka kwayo nayiphi na into okanye into, iyahambelana nazo zombini i-pc kunye neMac ngoko ke nokuba ungowuphi na umsebenzisi ungayenza ngokulula isenzo kwesi sixhobo kunye kuphela -iTouch.!
I-SPY013-irejista yePEN VOICE:
Njengoko sonke sisazi, ngalo lonke ixesha uqinisekisa ukuba uyikhuphe iliso kuyo yonke loo nto yenzekayo kwindawo ethile nokuba ibe kwindawo kawonke-wonke, okanye igumbi elithandwayo. Ufuna ukuqinisekisa ukuba icebo olisebenzisayo lihlala lingabonakali emehlweni aliso eliqhelekileyo okanye ufumana into edibeneyo kunye nezinye izinto ezijikeleze itheko elungiselelwe loo njongo, ungaya nge-SPYV013, yintoni ekhethekileyo malunga Le gajethi intle kukuba inxibe njengeyona nto ibaluleke kakhulu apho ikhoyo. Ipeni, ngoku ngubani onokucinga ukuba ipeni elilula lingasetyenziswa njengerekhodi yelizwi kwanelomgangatho ophezulu kakhulu ukuba Ungarekhoda ukuya kuthi ga kwiiyure ze-20 ngaphandle kokuphumla?! Iza kunye nenkumbulo eyakhelweyo ye-8 Gb, ke akufuneki ukhathazeke malunga nokugcinwa ngaphakathi kwezo yureky 20 iiyure nokuba. Esi sixhobo sigqibeleleyo ukuba ujonga umntu okanye umntwana wakho oshishino okanye ongumfundi. Njengoko ungabanikeza nje le peni okanye ubeke oku kwibhokisi yabo ukuqinisekisa ukuba unoshicilelo olusisigxina lwento abanayo okanye abathetha ngayo nokuba baphi!
I-SPYV009 -I-MINI i-USB THUMB IDOLOBHA:
Alithandabuzeki elokuba izixhobo ze-USB yenye yeendlela ezinamandla zokuhambisa izinto zisuka kwenye ikhompyuter ziye kwenye, zilula kakhulu, kwaye ungazithatha uzise naphi na ngaphandle kwakho nokuba unexhala malunga nendawo njengoko unokuzifaka nje kwijezi yakho ipokotho! Kodwa ntoni ukuba, i-USB enye ikuqhubela ukuba uye nayo yonke indawo inokuqinisekisa ukugcina ugcino lwakho lukhuselekile kwaye nawe ukhuselekile? Kulungile, oku kulapho i-SPYV009 yenza ukungena kwayo! Ngenxa yesimo sayo sedrive ypenti, akukho mfuneko yokuba ukhathazeke ngokuba ubonwe ngento erekhoda kwilizwi, nokuba ngowuphi na umdlalo okanye itheko lakho. Kuba abantu abaninzi bangena kwizinto zekhompyuter kwezi ntsuku, baqinisekile ukuba banayo enye kwaye ukuba umntu omthandayo okanye iqabane ocinga ukuba liyakopa nalo. Ibhingo, ke ukuba unamathandabuzo kwiqabane lakho ukuba ikwizinto aziqhele ukuba zizo okanye zineliso elibukhali lokuba xa bengaphandle, banesimo sengqondo esingafaniyo nabantu kunokuba le kunokuba yinto okudingayo ukuze uqiniseke kwaye ubakhathalele ngaphandle kokusondela kubo konke konke. Ingarekhoda yonke into njengekhamera ngelixa iqinisekisa ukuba akunandaba nokuba kwenzeka ntoni indawo, ihlala iphantsi kolawulo ngesandi sayo sokurekhoda ngelizwi!
I-SPYV012 - ISIQINISEKISO SEVOTI YOBUCHULE:
Alithandabuzeki elokuba amantombazana yeyona nto kunzima ukuyilawula xa kuziwa kwihlabathi lanamhlanje njengokuba abantu abaninzi ngeli xesha lethu behlala bekhangela ukufumana intombazana abanokungcungcutheka nayo okanye bayonwabe nayo. Ukuqinisekisa ukuba iqabane lakho alihambi ngenxa yento enjalo okanye sele ingabahlobo nomntu ekungafanelekanga ukuba kunye naye. Le yeyona gadget ifezekileyo onokuthi ewe, SPYV012. Esi sigxina serekhodi yelizwi sisihogo somtsalane ngobuhle baso kunye nesixhobo esikhulu sokurekhoda kwilizwi lekhosi njengoko igama lisitsho. Mane usinike nje nabani na ofuna ukubonwa, kwaye baya kuyamkela ngentliziyo evulekileyo ngenxa yokuba imhle kangakanana kwinqanaba lobuhle bayo. Le nto inokurekhoda ukuya kwiiyure ze-5 ngqo ngaphandle kwesidingo sokuhlawula, ke akufuneki ukhathazeke malunga nokuphulukana nentetho yokuphina apha naphaya. Inesitoreji esakhelweyo se8 GB kunye nesiqinisekisa ukugcina idatha eyaneleyo ukuba isebenze ngaphandle kokumiswa. Esi sisipho esinye esihle esenzayo sobabini, khusela umntwana wakho kwaye qinisekisa ukuba sisezandleni ezichanekileyo nokuba zikwiphi indawo.
I-SPYV020-irejista ye-OMG BADGE DIGITAL VOICE
Wonke umntu uyathanda ukuba nezo bheji zincinci zinokuzinxiba ngalo lonke ixesha, ndiyakholelwa ukuba akunamsebenzi nokuba yeyiphi inxalenye yakho. Ukubanika ezi zinto zincinci zincinci ezintle kubo kuya kubavuyisa kwaye benze usuku lwabo. Kodwa kuthekani ukuba sikuxelele ngokwenza usuku lwabo unokwenza nolwakho? Ewe, kuba i-SPYV020 iza nesishicileli selizwi sangaphakathi esinokuthi sikhangele umntu esimthandayo kwaye sikuxelele zonke iinkcukacha ezizodwa malunga nabantu abanxulumana nabo okanye izinto abazenzayo kunye nalapho ungekho ngakubo. Ayisiyi kuphela le nto ikwenza ukuba ungabi ngumzali ozinqwenelayo ngokusoloko uphezulu kwiqabane lakho ngalo lonke ixesha kwizigaba zokuqala okanye njalo ukuze ungabakhupheli engxakini, kodwa ikwaqinisekisa ukuba ixesha lokurekhoda lisemgangathweni! Irekhodi ngefomathi yeaudio ye WAV kwaye yakhiwe nge8gb yememori egcina izinto zibaluleke kakhulu kwaye ibonelela ngokugcina ongakucela!
I-SPYV027 - ISIQINISEKISO SEZITHUBA ZEHIVDEN
Le yenye yegajethi emangalisa xa ufuna ukurekhoda yonke into eyenzekayo kwindawo kwaye uqiniseke ngelixa ungabonakali ngathi ungumntu ohambahamba olwandle emile esithunzini esiva ukuba lo mntu uthanda okanye uthetha ngantoni. I-SPYV027 inika inqanaba lokuphambana komgangatho kunye nexesha elifanelekileyo leebhetri ukuba uhlale uqinisekisa ukuba ungomda owufunayo wokunakekela iqabane lakho, okanye omnye umntu ocinga ukuba ungalimaza okanye wonakalise ubuhlobo kule mihla. Ukuba umntu wakho ofuna ukuthintela zonke igajethi ezimdaka phezulu, le yeyona nto uyifunayo ekuqinisekiseni ukhuseleko lweqabane lakho okanye nabani na ongomnye kwaye uhlale ungacacanga ngokupheleleyo. Ikwaqinisekisa ukuba ungaze ubonwe nakubani na omnye umntu ngenxa yoyilo lwayo olunqabileyo!
Iinkampani ezininzi zisebenzisa iTeknoloji ukubeka iliso kubasebenzi
Ukujongwa kwabasebenzi kukusetyenziswa kweendlela ezahlukeneyo kwiiofisi, nakwezinye iindawo zomsebenzi ukuqokelela ulwazi malunga nemisebenzi kunye neendawo zabasebenzi. Iinkampani ezininzi zamkela itekhnoloji yakutshanje yokubeka esweni abasebenzi ukuze baphucule imveliso kunye nokukhusela izixhobo zokusebenza. Eyona njongo iphambili kukuthintela isimilo esingamkelekanga emsebenzini.
Ngaba uMqeshi wakho unokukuChola emsebenzini?
Ungazifumana njani iikhamera ezifihliweyo ekhayeni lakho, kwimoto nakwiOfisi yakho?
Kungumsebenzi otyhafisayo ukufumana ikhamera efihliweyo ekhayeni lakho, emotweni naseofisini. Ngelishwa, abantu abaninzi bakhalaza malunga noku kuhlaselwa kobumfihlo njengoko sele kuyinto eqhubekayo. Olunye uphando lubonise ukuba iipesenti ezinkulu ze-11 zabaphenduli zifumene ikhamera efihliweyo ekhayeni labo, emotweni, eofisini, okanye ehotele. Zilinde ngokufumanisa ukuba ungajonga njani ikhamera efihliweyo kwindawo okuyo. Ukukhangela iimveliso zethu ezikumgangatho ophezulu ukuba ziphonononge Cofa apha.
Iindlela zokutshekisha iikhamera ezifihliweyo:
Kudliwanondlebe, ingcaphephe yoPhononongo lwezobuGcisa kunye noGqirha weNgqondo wehlile ukubhengeza igama lakhe ngenxa yobuthathaka bomsebenzi wakhe waxelela umntu obizwa ngokuba yiMonki. Wakhangela izixhobo ezifihliweyo kwimimandla yongquzulwano ukuze afumane amanqanaba aphezulu e-United States emkhosini. Usinike isiqwenga sengcebiso yokukhangela ikhamera efihliweyo.
Zintathu iindlela ezibaluleke kakhulu zokujonga ikhamera efihliweyo:
Iskena seRadio Frequriers (RF)
Kukukhangelwa kweRadio Frequency encedisa ekuchongeni isixhobo esigqithisa ngokusebenzayo. Kule mihla, abantu abaninzi bafuna ukuba nemfihlo yabo kodwa abantu abaninzi basebenzisa izixhobo ezininzi ukubhengeza imfihlo zabanye. Uninzi lwabantu luselungelweni ngenxa yezixhobo ezilimaza ubumfihlo babanye kodwa ngokuqulunqwa kwezikena zeradio frequency, ingxaki isonjululwe. Umzekelo, Spy Ikhamera ichaze umqondiso wesiginali / iLens / Detector Magnet (SPY 995), I-Detector Bug Ikhamera ye-Anti-Spy efihlakeleyo (SPY999), I-GPS / SPY Camera RF iDual Signal Detector, iRange 1-8000MHz, GPS / 1.2G / 2G / 3G / 4G, umgama 5-8 (SPY993). Ezi zixhobo zinomsebenzi oqhubela phambili wokukhangela ikhamera efihliweyo.
Ungazifumana njani iikhamera ezifihliweyo:
Ukuphefumla malunga nokuba ugadwe ngokusondeleyo ekhayeni, emotweni, ehotele, okanye eofisini kunokonakalisa ukuphumla kwakho kunye nokuthuthuzela. Nangona kungekho kukhangela kugqibeleleyo, ungathabatha amanyathelo ukuzama ukubona ikhamera yokuhlola efihliweyo kunye nezixhobo zokurekhoda. Ukuthatha isigqibo sokuba yeyiphi na imilinganiselo oza kuyisebenzisa kuxhomekeke ekubeni unamandla kangakanani na, kwaye uzimisele kangakanani ukuphazamisa ukuhlala kwakho kukhangelo.
Yenza indawo yokuzingela ngokwenyani yendawo, xa ufuna izinto ezinokubekwa njengezilwanyana ezixakeke kakhulu, izixhobo zokujonga umsi, iifreyimu zemifanekiso, izibane, okanye iincwadi. Unokufumana iikhamera ngokukhangela izinto ezibonakala zikhonjwe kwiindawo zegumbi ngendlela engaqhelekanga. Unokufumanisa ukuba iikhamera ezifihliweyo ezifihliwe phantsi kwezitulo, iitafile okanye iisofa, okanye iivoti ezingaphakathi kunye neembiza okanye emva kwamakhethini.
Elinye inqaku lokufihla kukukhangela izixhobo zokurekhoda. Zonke iiAlarms ezikhuselekileyo, ezivelisa izixhobo zeCCTV, ziphakamisa ukucima zonke izibane kunye nokufuna izibane ezincinci eziluhlaza okanye ezibomvu; ezi zibonakaliso "zamandla kwi" izikhombisi ze-LED zezixhobo zokurekhoda. Elinye icebo kukukhangela amachaphaza e-inapt okanye imingxunya kwifenitshala yesamente kunye neendonga ezinokubonisa ikhamera efihliweyo emva kwayo. Kuya kufuneka ucime zonke izixhobo zombane, kubandakanya iifriji kunye nomoya opholileyo, kwaye umamele ukuduma oku-buzzing okanye ucofe ezinokubonisa ukurekhoda izixhobo. Sukucima isikhuseli esilawulwa ngombane, njengoko oku kunokubangela isiphoso okanye kukhokelele kwityala ongalindelekanga.
Khangela nayiphi na imibane edanyazayo okanye esikhanyayo. Uninzi lweekhamera kunye nezixhobo zokumamela zibandakanya ukulungela okanye ukukhanya, kwaye ukugungqa kwayo kuya kukunceda uyifumane. Ngelixa ezi zibane zinokuthi zikhubazeke ixesha elide, umntu oqalayo unokulibala okanye angathembele kuwe ukuba awusoze ukhangele isixhobo esityelweyo. Ukucima izibane kunokukunceda ukuba uzifune.
Zama ukumamela ingxolo ye-elektroniki, nangoku, okanye uhlebeze xa ukhangela igumbi. Nangona izixhobo ezininzi zokurekhoda zinokusebenza kwimfihlo, ukucofa okwenziwa zizixhobo zombane akunakuze kuthuliswe. Zininzi izandi ze-elektroniki ozivayo, ke mamela kakhulu kuyo nayiphi na into evakala ngokwahlukileyo. Isixhobo esincedayo sokuva, njengesincedisi sokuva, ngekhe sixhase ngaphandle kokuba uhlala unxibe enye, njengoko kunzima ukwahlula isandi sento yangaphandle kunye nengxolo eyenziwayo ngoncedo lokuva. Isixhobo sokujonga rhoqo kwiRadiyo siluncedo kakhulu koku. Ukuphonononga ezo mveliso zokuhlola ndwendwela iwebhusayithi yethu.
Khanyisa isibane kwiindawo ezahlukeneyo zegumbi, ngakumbi kwiindawo ezibonakalayo. Ngamanye amaxesha, abantu bayazifihla izixhobo zokujonga ngasemva kwezibuko okanye ezinye iindidi zeglasi ezigubungela ngokufanelekileyo nantoni na esemva kwayo phantsi kweemeko eziqhelekileyo zokukhanyisa, kodwa zichaze nantoni na ukuba ukukhanya kukhanye ngqo kuyo. Unokwazi ukubamba umboniso kwiilensi zekhamera efihliweyo. Isibane siyakunceda ekukhangekeni kwakho ngokwasemzimbeni ngokunciphisa ubungakanani bendawo iliso lakho ulikhangelayo kwaye liya kukuvumela ukuba ujonge kuyo nayiphi na into engaphandle kwendawo.
Sebenzisa umbhobho wesibonakaliso seRadio Frequency (RF) ukuncedisa kuhlolo lwakho. Ezi zixhobo ziphethwe ngesandla zinokubuqonda ubunqamle bonomathotholo busebenzisa izixhobo zokurekhoda, kwaye bancedise ukuzifumana. Ngelixa ikhomputha yokuphawula ingakuxeleli ngqo ukuba iphi na ikhamera efihliweyo, iya kukulumkisa njengoko usiya usondela ngokuthe chu kumthombo wayo, ekuncedeni ukuyifumana ngokukhawuleza. Kule meko iimveliso zethu ezisezingeni eliphezulu ziluncedo, kwiinkcukacha ezithe kratya Cofa apha.
Ukuba ufuna ukuchitha ixesha elininzi ukukhangela ikhamera efihliweyo, ungakhangela kwiindawo ezininzi apho inokufihlwa khona ikhamera okanye imakrofoni. Umbhali wezobugcisa kwezohambo uAndrew capelle ubhala ukuba iikhamera zifihlwe rhoqo kwizinto ezinobuninzi, umzekelo, izikrini ezinkulu zeTV. Ucebisa ukujonga kumacandelo amabini aphambili eendawo ezifihliweyo ezinjengabalandeli, izibane zephahla kunye neendawo zokuhlala; kunye nezinto ezinokutshintsha ezinje ngewotshi ye-alam, isibane esiphathwayo, okanye umnxeba.
Kunye neendlela ezichazwe apha ngasentla zokuKhangela iikhamera ezifihliweyo ekhaya, eofisini, okanye emotweni, siya kuzisa ezinye iingcebiso kunye neendlela zokufumana iikhamera ezifihliweyo.
Ungatshayela njani igumbi / imoto / iOfisi yesixhobo se-Elektroniki yokuTyhola ngoncedo loMatshini weRadio Frequency Detector:
Ukudibanisa izixhobo zokumamela okanye iibhugi azisetyenziswa ngurhulumente kuphela kodwa namashishini kunye nabantu abanqwenela ukubona okanye ukukhangela abanye. Nangona ezinye zezi zixhobo zihambele phambili kwezobuchwephesha kangangokuba phantse azibonakali, uninzi lwezinambuzane zinokufunyanwa ngokulula ngenxa yokuxhomekeka kwimithombo yamandla kunye neempawu zerediyo. Ukuhlala xa kufakwe isixhobo sokumamela ekhayeni lakho, eofisini, okanye kwisithuthi, kuya kufuneka uphonononge yonke imithombo yamandla kwaye uskene imisetyenzana yerediyo kuloo mmandla.
Ukujonga Imithombo yezaMandla:
Susa zonke iipleyiti zokuvula kwaye utshintshe iipleyiti kwigumbi olifunayo. Nje ukuba ususe iplate, kufuneka uqaphele imingxunya enxande enemigca eqokelelweyo edongeni eludongeni olungasemva kwayo. Le mingxunya ziindawo eziphambili zezixhobo zokufihla kuba zinikezela ukufikelela ngokulula kumthombo wamandla: iingcingo. Ngoku khanyisa isibane sakho kuyo nayiphi na imingxunya eludongeni. Uya kujonga kuphela ngaphakathi kwi-wiring. Ukuba uya kwazi nantoni na ebonakala ikrokrela okanye ingabikho ndawo, ungaze uyichukumise. Nxibelelana namagosa anyanzelisa umthetho kwaye uwaxelele ukuba ufumene ntoni.
Vavanya nayiphi na enye imithombo yamandla enokufikeleleka esegumbini, njenge, iibhokisi zefuse kunye nokulungiswa okukhanyayo ngendlela efanayo. Kwakhona, ukuba ufumanisa nantoni na, tsalela amapolisa.
Jonga indawo ephezulu nophahla. Kwezi ndawo, zihlala zininzi i-wiring ebonakalayo, umthombo wamandla onokufikeleleka ngokulula.
Ukulinganisa iDetector Frequency Detector:
Tshintshela kwisithinteli seRadio Frequency yakho (ibug), ukuguqula ucofe-up kwaye usete kwindawo egudileyo. Kufuneka iqale ukuphuma ngokukhawuleza.
Jika ucofe iRadio Frequency yokuthintela umva phantsi de ukutsha kuphele.
Fowunela kwenye yeeselfowuni yakho iye kwenye iye ime ecaleni kwesicoci seRadio Frequency. Kufuneka iqale ukukhawuleza ngokukhawuleza.
Hambisa malunga ne-10 ukuya kwi-12 iinyawo kude nesithinteli seRadio Frequency ngelixa ugcina unxibelelwano lwefowuni luvulekile. Umtshisi kufuneka aqhubeke nokubanjiswa, kodwa ngokuthe ngcembe, kwinqanaba lokuphantse libetha i160 ngomzuzu. Ukuba ihla kancinci kunokuba ibethe i-120 ngomzuzu malunga nomzuzwana, jika ucofe ukuya phezulu ukuze ukhulise uvakalelo lwayo. Ukuba ibetha ngokukhawuleza ngakumbi kune-160 ibetha ngomzuzu, jikisa ucofe kancinci.
Hambisa isithinteli seRadio Frequency ngokuthe ngcembe ngaphezu kwabafundi bazo zonke izixhobo ze-elektroniki kwigumbi, gcina iRadio Frequency Detector emalunga neemitha ezimbini ukusuka kwisixhobo ngasinye. Ukuba iqala ukuqhekeza, qiniseka ukuba isixhobo osikhangeliyo sicinyiwe kwaye uskene kwakhona. Ukuba umsunguli weRadio Frequency uqhubeka uphuma ngokukhawuleza, usenokuba ufumenebug.
Gcina le nkqubo kunye nazo zonke izinto ezingezizo zombane kwigumbi-iikhabhathi zefayile, iidesika, izitulo, njlnjl .- okokugqibela udonga. Enye ibhiphu evela kumtshini weRadio Frequency mhlawumbi ayibonisi ukuba ufumene ibug; mamela njengenye indlela yokukhawuleza, ukuphuma rhoqo, okuya kubonisa usasazo lwerediyo.
Tsalela umnxeba kwisikhululo samapolisa esikufuphi ukuba uyakholelwa ukuba ufumene okuthile.
Unokwenza ntoni ukuba ufumana iKhamera efihliweyo:
Ukuba umntu othile ufihla iikhamera kwenye indawo ekhayeni, kwigumbi lasehotele, kwirente, nakwiimoto, oko kuchasene nomthetho kuphela nangokwemvume yomthetho ongayenza. Umzekelo, kwimithetho yeenkampani eziqeshisayo malunga nezixhobo zoqwalaselo lwe-elektroniki zichaza ukuba zifuna ukubamba iindibano ukubhengeza zonke izixhobo zoluhlu kuludweliso lwazo, kwaye ziyabathintela nakweyiphi na izixhobo zokubeka iliso ezikhoyo okanye ezikhangela indawo yangaphakathi yeendawo ezithile zabucala njengegumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela nokuba kutheni. malunga nokuba zichaziwe. Qinisekisa ukuba ujonge uluhlu lwerenti yokuqeshisa ngononophelo kuyo nayiphi na into ekhankanyiweyo kwikhamera ye-nanny kwigumbi lokuhlala ngaphambi kokuba uyibhukishe. Ukuba ufumanisa enye kwirenti yakho yeholide, yeka kwangoko uxelele inkampani. Ukuba ufumana ikhamera efihliweyo kwigumbi lasehotele, kwangoko cela utshintsho kwigumbi. Ngeemveliso zethu eziphakamileyo zokubeka esweni Cofa apha.
Iikhamera ezifihliweyo zikaLawson ziyahluka phakathi kolawulo lwamapolisa. Kwiimeko ezininzi, isenokungabikho semthethweni into yokuba umntu akubhalele ngaphandle kolwazi lwakho. Njengoko ubuchwepheshe buba, iikhamera kunye nezixhobo zokumamela ziye zathi cwaka, zincinci kwaye zifihlakele ngokulula. Ngelixa le nto inkulu kuye nabani na onqwenela ukwenza ukubekwa kweliso, iyakucothisa ukukwazi kwakho ukuziva ukhuselekile emehlweni prying, nokuba sele uwedwa. Ngelixa kwezinye iimeko unokukhuselwa kwiikhamera ezifihliweyo yimithetho yolawulo lwakho — amapolisa, umzekelo, awanako ukuzityala ezi zixhobo ngaphandle kwemvume, kwaye abemi babucala abanakho rhoqo ukurekhoda isandi okanye ividiyo kwindawo yabucala ngaphandle kolwazi kunye nemvume Ukubhalwa kwezixhobo ezifihliweyo kunokuba yinto exabisekileyo kunemithetho eyenzelwe ukukukhusela kuzo.
Ukuba ubona umntu othile esaphula umthetho ngokwenzakalisa ubumfihlo bakho, yazisa amapolisa kwangoko, ulawulo lwehotele ukuba ukule hotele okanye kwi-media. Kuya kufuneka ukuba ukhangele igumbi ngononophelo olukhulu ukuze uqiniseke ukuba awuxovuli nasiphi na isixhobo okanye ifenitshala, kuba oku kungakhokelela kwiingxaki zomthetho zoluntu okanye zolwaphulo-mthetho (ukuba ukwihotele). Kuphephe ukuphikisana ngamazwi ashushu nabasebenzi basehotele abanokuya kwiziphumo zomzimba.
Xa ungafanele ujonge ikhamera efihliweyo:
Ukujonga iikhamera ezifihliweyo lonke ixesha ayisiyonto ilungileyo. Ibambela le-CEO ye-Advanced Operational Concepts kunye nejoni elalihlala kwi-Special Force kunye neGreen Beret ngumbono wokuba kumazwe amaninzi afana neRussia ne China kunokwenzeka ukuba iinkonzo zobuntlola zikarhulumente zibeke esweni iihotele ezihamba rhoqo kubahambi beshishini. Nabani na abajonga besebenzisa iindlela zokukhangela ukufumana izixhobo ezifihliweyo kwiindawo zabo zokuhlala kunokwenzeka ukuba abhalwe uphawu njengothuselo lobukrelekrele bokusebenza kwaye baphathwe ngokufanelekileyo. Ukuzisa kwanezixhobo zokukhangela ezinqabileyo kula mazwe kunokwenzeka ukuba umhlaba umhambi ube ushushu ngamanzi ashushu, ngamanye amaxesha ngaphambi kokuba uphume kwisikhululo seenqwelomoya.
Iikhamera eziphezulu ezifihlakeleyo ze-10 ezifihlakeleyo ze-SPY ze-Monitor Cheating Spouse
Kukho isaci esinye saseRussia esithi "Trust kodwa Qinisekisa", ukuthembana yinto esisiseko esigcina ubudlelwane bomelele phakathi kwabantu ababini. Phantse sonke isibini sihamba kwisigaba apho bacinga ukuba iqabane labo likopela kuye. Ukuthathela ingqalelo kancinci kunye nokwenza uphando kunceda ekukhohliseni amaqabane. Kodwa awunakugcina iliso ngalo lonke ixesha kwiqabane lakho ngoko ke kweli nqaku siza kuphakamisa iikhamera ezifihlakeleyo ze-10 ezifihlakeleyo onokuzisebenzisa ukufumana iqabane lakho likukopa okanye akunjalo.
I-SPY013 - YIBA IKHAMDI YENKAMPANI:
Sonke kufuneka sivume ukuba uthando luye lwaba lizwi nje kule mihla, akukho mntu uzithathela ingqalelo ngokungathi kunjalo kwaye ukuba umntu othile wenza njalo. Bathatyathwa kancinci njengegqabi lomthi owaphukileyo. Nangona ukwelo xesha, apho ungasokuze uthembele intombazana eqhubeka isithi ndiyakuthanda ebusweni bakho, kodwa izonwabisa kunye nayo yonke enye indoda edibana nayo. Uza kufumanisa njani ukuba ungumdlali owonakalisa intliziyo yakho okanye umthandi osemthethweni? Kulungile, i-SPY013 yeyona nto. Le khamera yewashi efihliweyo inokubekwa nakweliphi na icandelo, nakweyiphi na indawo okanye kulo naliphi na igumbi ngaphandle kokubala okanye ukuqatshelwa njengekhamera kwaye ikwanikeze ikona efanelekileyo yokugcina iliso kwiqabane lakho. Iza kunye nombono wekhamera ye-1080p HD ebusuku enika ithuba elikukhuthazayo lokuqinisekisa ukuba akabikho sebhedini yomnye umntu ngamaxesha obusuku nakanye. Ayisiyiyo loo nto kuphela kodwa iza neempawu zokutshekisha intshukumo ukukwenza ukuba wazi isenzo ngasinye esincinci esivezwe kwiscreen!
I-SPY088 -I-WIFI AIR FRESHENER CAMERA:
Ngoku ungayiphepha njani into yokuba iqabane lakho lithandabuze ukuba uthandabuza okanye ucinga ukuba babona omnye umntu? Ewe kunjalo, ngokuqinisekisa ukuba igajethi oyibhangayo ishiyekile emehlweni abantu. Kwaye yeyiphi enye enokuba yeyona ndlela ilungileyo yokukhupha umntu endaweni yokufuthelwa komoya kunokuba ungaphelelanga nje umoya kodwa ikwenza oko ukuba kube lula ukugcina i-engile efana nomnye umntu kwiqabane lakho ngelixa bekopa kuwe. Esi sixhobo sinakho ukurekhoda ukuya kwiiyure ze-70 ngqo ngaphandle kokuphumla ngokunika ithuba elifumeneyo ukuba ufuna ukwenza ii-footages ezinde zakhe nabani na xa ufuna kwaye naphina ufuna ngaphandle kokukhathazeka malunga nokuphelelwa kwebhetri. Ikwanokuma imana ukuya kwiiyure eziyi-100 ngokuqinisekileyo eziphambeneyo ngokuqinisekileyo. Le nto iya kuba nesohlo kuwe xa usemsebenzini, ekholejini okanye kwenye indawo kwaye iqabane lakho liyathanda ukuya ngaphambili kwaye ubize umntu othile ngaphezulu. Ngaba uyayibamba le ndawo naphi na inyani kuba ngubani obenokuyigcina ifreshener yomoya ujikeleze ngandlela zonke?
I-SPY151-UTSHINTSHO LOMNYANGO / I-RAZOR MINI DVR CAMERA:
Xa kufikwa kumcimbi wokukopa, abafazi kuphela kwento abekwa kuyo ityala ngeli xesha amakhwenkwe nawo eyekile ukubanjwa ngamathuba amaninzi aphule intliziyo yabathandayo babo ngathi abayonto. Ke ungaqinisekisa njani ukuba umntu wakho uyinyani kwaye ayingomntu ozokuphosa ngaphezulu komntu onikezela ipeni okanye ezimbini? Ewe kunjalo, ngokumjonga ngamehlo kwaye uqiniseke ngelixa ungekhoyo okanye xa ungekho ngakuye akukhaka ujikeleze kwenye intwana okanye into ethile. Ngenxa yale njongo, esi sixhobo sesona sigqibeleleyo sokudibanisa imeko kwaye uhlale ungathandabuzeki ngokuqinisekileyo. I-SPY151 yigadget enakho ukurekhoda iividiyo zeprimiyamu ye-HD esemgangathweni kunye nesandi kwangaxeshanye ukuqinisekisa yonke into eyenzekayo kwindawo okanye kwigumbi okanye naphina apho ibekwe khona inokuba phezulu kwaye iviwe nguwe. Ingarekhoda ukuya kwizindlu ze3 ezingaqhelekanga ngerhafu eyaneleyo yexesha elifanelekileyo ukuba imeko engafanelekanga irekhode ngokupheleleyo ukuqinisekisa okanye uqiniseke ukuba iqabane lakho liyakopa okanye alikho.
I-SPY165 -WIFI CHARGER CAMERA:
Le nto incinci sele ikhankanyiwe kumanqaku amaninzi ngoku, kodwa kubonakala ngathi iyasebenza kunye neenjongo ungayisebenzisa ngokuba noluhlu olubanzi loluhlu ngokuqinisekileyo olubonakala ngathi aluzuphela. Ewe, sithetha ngekhamera yetshaja yeWIFI ngokwenene, yenye yezona khamera zingabonakaliyo umntu angenakuze nditsho ukuba AKUKHO qabanga malunga. Yivale nje kuyo nayiphi na indawo yendlu yakho kwaye uyiyeke ibize i-WIFI yakho ngelixa kwangaxeshanye iqinisekisa ukhuseleko olukumgangatho ophezulu kunye nomphetho obanzi ukuze ugcine iso lakho kuyo nayiphi na intombazana okanye inkwenkwe. Le yinto onokubeka nje etafileni okanye kuyo nayiphi na enye ikhabethe ewe iya kukunika okona kusebenza kakuhle ngenxa yekhamera yayo yokurekhoda ye10180p kunye nenqaku lokujikeleza le-180. Le yeyona kuphela isindisa ubomi kunye nolondolozo lobudlelwane bobabini, iyakuqinisekisa ukuba uhlala unjalo ngokomzimba nangokusuka entliziyweni yakho!
I-SPY175 -I-WIFI POWERBANK CAMERA:
Ngexesha langoku, abantu bebedala kakhulu ngenxa yokunyuka kwenani leendawo zokuthandana kunye neeakhawunti ezingezizo kuyo yonke indawo ukuzama ukutsiba iqabane lakho kude kuwe. Ngoku ukuphepha olu hlobo lokungcungcutheka kwaye uqiniseke ukuba umntu wakho omthandayo akawahlelanga nantoni na enjalo okanye ukopela kuwe, i-SPY175 inokuba yinto oyifunayo ukuze uqiniseke ukuba yonke into ihlala iphantsi kolawulo lwakho kwaye unokufumana okuncinci Ceba umlingane wakho ukuba ajonge into ayenzayo, ngubani ahlangana naye kwaye ngubani lowo ambizayo ngexesha elinye nokuba usekhaya okanye awukho endlwini. Emva kwayo yonke loo nto, ifowuni iye yangunobangela ophambili woku ukukopa kule mihla ukusukela kwitheknoloji kuyo yonke indawo njengoko abantu abaninzi bezakuzama ukuthandabuza benze amantombazana amabini ngexesha elinye kuwo. Faka nje le khamera ye-spy, uyihlawulise, uyibeke kwindawo oyifunayo okanye kwindawo uyivumele ukuba iwenze wonke umsebenzi wayo ngesisombululo sayo sekhamera ye4K kunye nenkxaso yombono ebusuku ukuqinisekisa iliso elifanelekileyo kwiqabane lakho nokuba kukukhanya okuncinci. amabala.
I-SPY297 -I-WIFI CLOCK CAMERA:
Wonke umntu ebeqhubeka eyenzela zonke iintlobo zezinto kwezi ntsuku kuba uhlahlo-lwabiwo mali lugqunywe kwaye unokukunika iintlobo ngeentlobo zezinto obuzifuna ukusukela ixesha elide udityaniswe kwipakethi enye. I-SPY297 yeyona nto ilungileyo kuwe ukuba ungomnye waba bantu, ngoba? Kuba isebenza njengewotshi esemgangathweni, isivusi, ikhamera yeWi-Fi, kunye nesithethi esinebhendi engenazingcingoBlu ngexesha elinye! Ke, ukuba iqabane lakho likreqile kuwe ngamaxesha obusuku okanye xa uphumile, le yotshi efanelekileyo efunekayo yokuphosa ixesha lakhe kunye nobungqina obuhle kuba le khamera inokurekhoda ukusonjululwa kwe-HD. iividiyo kwanasebusuku! Ukuqinisekisa ukuba umntu ophula intliziyo yakho akaze afune ukwaphula omnye umntu emva kwayo, uya kuba usesihogweni esoyika ukwazi ukuba ingakanani into anokuhamba kuyo emva kokufumanisa ukuba uyakopela. Ungayonwabela legajethi njengesithethi seBluetooth kwaye udlale iithoni zakho ozithandayo kuyo ngelixa uyenza iwotshi ye-alamu nako nokuba ayisebenzi, ngenxa yoko le yeyona minyaka yobudala.
I-SPY032 - IPHULA LENKCUKACHA YOKWENZA INDLELA WIFI
Ayikho into efana neyona nto yakudala yokuhlola into? Ilungile abantu i-SPY032 yinto nje ukuba uyazi kakuhle ukuba iqabane lakho likukopa nomntu kwaye ufuna ukubabamba ngesandla-sinye njengoko esi sixhobo sinokulingana naphina naphi na kwikona yomzimba womntu nokuba ngaphandle kolwazi Ukuqinisekisa ikona oyidingayo yokurekhoda izinto ezinokungqina kuye nakanjani na ukuba ukuzikhohlisa kwakhe akuhambelani nokudlala ngaphezulu kwentliziyo yakho kunye nomnye umntu. Esi sixhobo siza nebhetri yokupakisha amandla esikuvumela ukuba urekhode ukuya kwiiyure ze-70 ngqo ukuze uhlale ulinde ngokuzolileyo ngelixa ushiyeka uqhagamshelwe kuyo nge-WIFI uqinisekisa ukuba une-engile efanelekileyo kwaye wadubula ukuze omnye umntu angakhanyeli njalo. Le mveliso ayinakuba yinto nje engenamsebenzi okanye iphume ngaphandle kwesiphumo sokuba uyisebenzisa ukukhangela inenekazi lokukopela, injongo yezokhuseleko okanye ulonwabo nje! Iyabonakala ukuba iyonwabisa kuwe ngeziphumo zayo ngenxa yeempawu ezizaliswe yiyo.
I-SPY208 -I-WIFI BlUETOOTH ISithethi se-WIFI:
Uthando yinto enobuthathaka kakhulu kwaye ukuba awubonisi ngobungqina obufanelekileyo. Nomnye umntu usenokuba uyaqhatha unokukufumana nokuba uthini ngenxa yokuba injalo indlela elihamba ngayo ilizwe ngeli xesha lethu. Ke, ezibuza ngento onokuyenza ukuze uhlale ungabonakali ngexesha elinye ngelixa ugcina iqabane lakho lijonga okanye uqinisekisa yonke intshukumo, ngaba ujongwa nguwe? Ngokuqinisekileyo, qhubela i-SPY208. Le nto iinguqulelo ezinganyanisekanga zesithethi seBluetooth ngenene, ungadlala umculo kuyo kangangexesha elithile kwindawo yakho, eofisini okanye nakwezinye iindawo kwaye uyiyeke apho idlala ukuze ugcine iso lomntu ofuna ukuba lilo. Ukwenza okanye enza njani xa ungekho ngeenxa apho. Ngetekhnoloji yayo yenethiwekhi ye-WIFI, ungaxhuma kuyo nangaliphi na ixesha naphina nakweliphi na igumbi lendlu yakho. Ukurekhodwa kwayo kwevidiyo ye-4L HD kuyaqinisekisa ukuba unazo zonke iinxalenye zevidiyo ngokwakho kwaye ayiphumi. Yeyakho i-SD Card slot exhasa amakhadi e-SD ukuya kuthi ga kwi-128 GB ikunika nje ugcino oludingayo lokusebenzisa isixhobo esikhulu ngolu hlobo!
I-SPY156 -UYIBONISA IXESHA LENKOSA YENKOSA:
Le gajethi ilapha ngoku kufuneka ibe yeyona ingabonakaliyo kakhulu kuba iyinto enye eqhelekileyo ekhoyo phantse kuyo yonke indlu enye kwaye inokusetyenziswa ngokungakhathali konke konke njengoko sonke sisazi ukuba akukho mntu unokuthandabuza ukuba nekhamera kwidawun ibhokisi yemisipha?! Eyesibhozo, i-SPY156 yenza eyona ilungileyo kolu luhlu ngokutsho kuthi kuba le yinto enye onokuthi uhlale iliso kuyo nayiphi na umntu nokuba ingumlingane okrelekrele, makube kukhuseleko lwendlu yakho, ukugcina iliso ngeenxa zonke kuwe okanye nantoni na eyenye. Ibandakanya yonke into ngokutyibilikayo kangangokuba umntu akaze azi ukuba ingakanani ibhokisi yebhokisi enokudityaniswa xa isiza kubuchwepheshe. Kulungile, esi sixhobo siza sipakishwe ibhetri enokurekhoda ngqo ukuya kwiiyure ze-2 kwaye ixhase ikhadi le-SD ukuya kwi-32 GB. Ayisiyiyo loo nto kuphela kodwa enye into ekhethekileyo malunga nale khamera yebhokisi yeetiski kukuba ungayibukela iphila nangaliphi na ixesha ukusuka kwifowuni, ipc okanye ilaptop ngaphandle kokukhathazeka! Inokurekhoda ukuya kwisisombululo se-1080p iqinisekisa ngomgangatho ogqibeleleyo kwangaxeshanye ngelixa ikhuselekile ngokugqibeleleyo ijonge nayiphi na intshukumo ejikeleze indawo oyibekileyo. Le yinto enye umntu angaze ayithandabuze
IPHULO LOKUCWANGCISA UMCULO WESIFUNDA WIFI WAMI:
Akukho mntu unokufumana umculo owaneleyo, nokuba kukhe kwakho okanye iqabane lakho ofuna ukutshata naye ngeli xesha. Wonke umntu ufuna ukhetho lwengoma afuna ukubetha kuyo yonke indawo ahleli kuyo nayiphi na indawo okanye nangaliphina itheko ukuba ufuna ukuqinisekisa ukuba uyilawula ngokupheleleyo loo meko ngaxeshanye ungamkhupheli umntu. Ke oku kube kanye, ibe yinto yakho! I-SPY113 inokurekhoda ividiyo yesisombululo se-HD nangaliphi na ixesha ngelixesha iphinda isasaze kuwe ngefowuni okanye ngefowuni ofuna ukuyibona le vidiyo, ikunike ithuba lokuba kude nomntu ofuna iliso okwangoku Unayo i-angle efanelekileyo yokucacisa yonke intshukumo abayenzayo kwaye baqiniseke ukuba abayenzi into eyingozi kuwe, imeko yakho yomzimba okanye imeko yengqondo yakho. Kuba uthando luseligama nje kule mihla, ndiziva ngathi ezi zixhobo ziye zaba yenye inguqulelo eqhelekileyo yoko bakufumanisileyo njengoko ukuzisebenzisa ngokuqinisekileyo akuyona into ephosakeleyo.
Iikhamera ezifihliweyo: Ungazifumana njani kwigumbi lokuhlamba, igumbi lokulala negumbi lokutshintsha loluntu
Iikhamera ezifihliweyo kwigumbi lokuhlambela, amagumbi okulala kunye namagumbi okutshintsha esidlangalaleni aya kuba yimicimbi enzima emhlabeni. Ezi vidiyo zilayishwa ngaphandle kolwazi lwamaxhoba kwaye zibe zizizathu zokutshabalalisa ubomi babo. Ngokwamithombo i-80% ye-spy camera amaxhoba engamanyala angabasetyhini, kutsha nje apha eMzantsi Korea, abantu bebeqhankqalaza besithi "Ubomi bam ayisiyiyo nto yakho yokuziphatha okubi". Ngokufanayo, umqeshwa wase-Starbucks wafumana ikhamera encinci encamathele kwicala elingaphantsi lesicoci sendlu yangasese e-Allen Park. Ngenxa yaba bantu bayazi kwaye bakhangela iindlela zokufumana iikhamera ezifihliweyo kwindawo yabo yabucala. Nazi iindlela zokufumana iikhamera ezifihliweyo kwigumbi lakho lokuhlambela, igumbi lokulala kunye namagumbi okutshintsha esidlangalaleni kwaye kufuneka wenze ntoni xa uyifumana.
Iikhamera ezihloliweyo ezifihliweyo zenzelwe ukuba zifihlwe kwiindawo, apho kunzima ukuba uqaphele nangona kunjalo Khangela ezi ndawo zilandelayo apho ikhamera inokufihlwa ngokulula njenge,
Emva kwesakhelo seFoto
Ngaphandle kwezi ndawo zixhaphakileyo apha ngasentla jonga izinto ezinjengeengcingo ezikhokelela kuyo nayiphi na indawo okanye indawo efanelekileyo enokunika umbono ongcono welo gumbi kumntu okuphenyayo.
Kwindawo yethu yangasese njengegumbi lokuhlambela, amagumbi okulala kwaye ngakumbi kumagumbi okutshintsha esidlangalaleni sibona izibuko ezinkulu, apho siziva sikhululekile kwaye sikhuselekile ukubandakanyeka kwimisebenzi yangasese. Nangona kunjalo, izehlo ziphakamisa amaxesha amaninzi ikhamera ibekwe kwelinye icala lesibuko. Ngoku kuphakama umbuzo wokuba singenza njani siqiniseke ukuba isipili asinayo ikhamera. Inyathelo lokuqala kukujonga esipilini indlela ezimbini okanye hayi. Ukuze ubeke umnwe wakho esipilini ukuba kukho umsantsa phakathi komnwe wakho kunye nesipili, ke isibuko asizondlela zimbini. Oko kuthetha ukuba akukho khamera ifihliweyo apho. Nangona kunjalo, ukuba ubambe umunwe ukuya kwisipili oko kuthetha ukuba isipili sikwindlela ezimbini kwaye kunokubakho ikhamera efihliweyo emva kwesipili.
Akunandaba nokuba i-mastermind yotshaba yakho yayifihlwe njani kwikhamera, kodwa kuya kubakho umngxuma welensi yekhamera ukurekhoda imisebenzi yakho. Cima ukukhanya kwegumbi lakho kwaye uzame isibane esikhanyayo. Uninzi lweekhamera ezifihliweyo zine-LED eluhlaza okotshani okanye obomvu eziya kuthi ziqhume okanye zikhanye xa ukukhanya kufiphalaza iilensi zayo.
Sebenzisa i-Spyera Camera Detector (SPY995):
Esi sixhobo siyimveliso enobuchule obumangalisayo ekuncedayo ukubona amandla kazibuthe, ikhamera ye-WIFI okanye ikhamera efihliweyo ngocingo. Kulula ukuyisebenzisa kwaye inoluhlu olubanzi lokufumana. Ikwanaso isikrini esincinci esibonisa amandla eempawu njengoko usiya kwikhamera efihliweyo umqondiso wamandla uza kwanda kwiscreen. Kodwa kulumkele ukucima zonke izixhobo ezisasaza isiginali yerediyo ngaphambi kokusebenzisa isixhobo sokulahla ikhamera yesiphene.
Ukukhangela umnxeba kwifowuni:
Unokusebenzisa ifowuni yakho ephathekayo ukufumana ikhamera efihliweyo kwigumbi lakho lokulala, kwigumbi lokuhlambela okanye kwigumbi lokutshintsha likawonkewonke. Fowunela umhlobo wakho kwaye uqale ukuhamba kancinci kwaye umamele ukuba ilizwi lomhlobo wakho liyaphazamisa okanye hayi. Ukuba kukho indawo efihliweyo yekhamera kwiindawo ezinjalo, ukuphindaphinda kwayo kuya kwenza ingxolo kwifowuni yakho xa oko kubonakala kwifowuni yakho kusika umnxeba kwaye uzame ukujonga loo ndawo. Enye indlela kukuvula ikhamera yangasemva ye-smartphone yakho kwaye uzame ukubona umthombo ongalindelekanga wokukhanya okanye ukukhanya okungakhokelela kwikhamera efihliweyo.
Into oza kuyenza ukuba ufumanisa ikhamera efihliweyo:
Kukho amathuba amakhulu ngakumbi ukuba ulandela la manyathelo angasentla uyakufumana ikhamera efihliweyo ukuba ibekwe kwindawo yakho yangasese. Ke, into oza kuyenza ngokulandelayo. Okokuqala, wakufumana ikhamera efihliweyo ayiyichukumisi okanye uyihambise ngenxa yokuba inokuphatha iifoto zomrhanelwa. Okwesibini, hambisa into yakho ujonge ikhamera emva koko ubize amapolisa asekuhlaleni nabasemagunyeni abafanelekileyo ukuba baphande ngalo mbandela.
Iikhamera eziphezulu ezifihlakeleyo ze-10 ezifihlakeleyo ze-SPY zabasebenzi be-Monitor
Uphando lucebisa ukusebenzisa iikhamera zeCCTV ukubeka iliso kubasebenzi bonyusa inzuzo kunye nemveliso yaBasebenzi. Kukho izizathu ezimbalwa zokuba imibutho yenze oko. Okokuqala, ukuthintela nakuphi na ubundlobongela, ubusela kunye nolunye ulwaphulo-mthetho olunokwenzeka xa kungekho kulawula. Okwesibini ukukhusela inzala yeshishini ngokugubungela ukusebenza kwigumbi lolawulo ngalo lonke ixesha ukuqinisekisa indawo esempilweni nenokhuseleko kwaye ukuba kwenzeke into engalindelekanga ishishini linokunika ubungqina ngohlobo lwe-CCTV yonyawo enesitampu somhla kunye nexesha lomsitho. Okwesithathu ukubona ukusebenza kwabasebenzi, unxibelelwano, kunye nezinye izakhono ezizokukunceda ukuvavanya ukusebenza kwabasebenzi. Ukuba uqhuba ishishini apha kukho iikhamera eziphezulu ze-10 ze-CCTV omele uzisebenzisele ukubeka esweni abasebenzi bakho.
I-SPY306- SUPER NightVISion USB CHARGER CAMERA:
Ukuqinisekisa ukhuseleko ngokusemandleni alo, nayiphi na inkampani iya kufuna ukuya kwiinkcukacha kuba amazinga olwaphulo-mthetho ebesonyuka ngendlela kakhulu kwezi ntsuku. Iikhamera eziqhelekileyo zeCCTV yindlela ekulula ngayo ukuba ubanjwe liliso eliqhelekileyo ngenxa yoko uya kufuna ukuya kwinto engaqhelekanga, kwaye engalindelekanga ukuba ibe yikhamera yokhuseleko kule mihla. Ngoku, ukuba uphambi kokhuseleko oluthile, okanye umsebenzi wokubeka esweni ofuna ukubeka iliso kuyo yonke into ngelixa engakhange ayenze icace. I-SPY-306 yinto eyenzelwe wena, ikhamera efihliweyo ibekwe ngaphakathi kwitshaja, ukuze ubeke oku kwisokethi kwigumbi lomsebenzi kwaye uqaphele imisebenzi yabo yemihla ngemihla. Iza nekhamera yombono ebusuku njengoko inakho ukurekhoda ukuya kwisisombululo se-4K iqinisekisa ukuba unokuqinisekisa ngokhuseleko olugqibeleleyo nakukukhanya okuncinci okukhoyo. Unokubona imifanekiso ebonakalayo kubasebenzi bakho naphi na apho bathenga khona besebenzisa ii -application ze-smartphone.
I-SPY297-Ikhamera ye-WIFI yeClock:
Ixesha elingaphezulu, amasela, abaphangi, kunye nezikrelemnqa ezimhlophe ziye zahlaziya iingqondo zabo. Ziyayazi le mihla ukuba, xa zisenza into engekho mthethweni ngaphakathi kwendawo yeshishini, kufuneka ziqinisekise kuqala ukuba akukho mntu uneliso kubo, ezenza ukuba iikhamera zeCCTV zibe sengozini kwaye zibonakale. Nangona ukujongana nale meko, nawuphi na unogada okanye umgadi wokubek 'esweni unokufuna ukuqinisekisa ukuba unekona elithe tye kuyo yonke into ngelixa engaphathanga. I-SPY297 ikwenzela umsebenzi ukuba ungomnye wabo, nokuba ungomntu osebenza kwisebe lezokhuseleko okanye ungumsebenzi nje oqhelekileyo waseofisini okanye umqeshwa osemthethweni. Ungayibeka le gajethi incinci imangalisayo nakweyiphi na ikona yeofisi yakho kwaye uqiniseke ngokupheleleyo kuyo yonke into eseleyo ephantsi kolawulo njengoko le nto iza igcwele izijekulo ezahlukeneyo njenge-alamu yewotshi ye-radio ye-FM, isithethi esingasebenzisi zingcingo kunye nekhamera ekumgangatho ophezulu okhuseleko! Ngamafutshane, ngumhlobo wakho omncinci ofanelekileyo kuyo nayiphi na indawo. Ngaphandle kwento ungayibeka kule tafile yabasebenzi kwaye ujonge imisebenzi yabo yemihla ngemihla. Ngokumalunga nokujonga kwintsebenzo yomqeshwa kunye nemiba yobusela imibutho inakho ukulandela nonxibelelwano nokuziphatha kwabasebenzi kunye nabathengi kunye nabathengi. Kukuncedisa ekujongeni isitayile somsebenzi kunye nokuzimisela kwabaqeshwa ekuyileni imbuyekezo kunye nezicwangciso zokukhuthaza abasebenzi.
I-SPY296 -I-WIFI ROUTER CAMERA:
I-Wi-Fi iyeyona nto iphambili kuwo wonke amasebe, indlu, okanye indawo kawonke wonke kwezi ntsuku. Kufana ngathi asinakukwenza imisebenzi yethu yemihla ngemihla ngaphandle kwale teknoloji engenacingo nangona ingxaki yokunyuka kolwaphulo-mthetho kwikona nganye yehlabathi. Ingaba yinto entle kangakanani kwaye ilula kangakanani kubasebenzi be-Monitor ukuba le nto incinci enokunika ukuzonwabisa ngeyure kunye neeyure nayo iqale ukubonelela ngokhuseleko malunga nexesha elifanayo? I-Blinked kwengqondo yakho ilungile, i-SPY296 yenza kanye umsebenzi. Inokurekhoda iziseko ezisemgangathweni ezahlukeneyo njenge4K / 2K kunye ne-720p ngokoluhlu lwakho lwesisombululo olufunayo. Inokuxhasa ikhadi le-SD ukuya kwi-128 GB kwaye ingabekwa naphi na kwigumbi ukuba isetyenziswe njenge-Wi-Fi Router ngelixa kwangaxeshanye ikunika ithuba lokujonga yonke imeko yalo naliphi na itheko ngalo naliphi na iliso elibukhali elinxibelelana nalo ! Kunye nokukhusela umbutho kwizenzo ezinobuzaza nezenzakalisayo zabasebenzi kunye nezinye iiarhente kuyanceda ekugcineni nasekukhuseleni amalungelo abasebenzi nawabasebenzi kumalungelo emibutho.
I-SPY263-Isithethi seBlue SPY Efihliweyo Ikhamera:
Khawufane ucinge ukuba unayo ivenkile yomculo, yonke into ihamba kakuhle, unendawo ekhuselekileyo ngokupheleleyo unogada ehleli ngasemva kodwa ngolwesibini oluzayo umphangi uyeza kwaye into yokuqala yokumbona edubula ikhamera yokhuseleko. Boom, lonke useto lwakho luvuthuze luthuthu. Ukuthintela isenzo esingenasiqinisekiso, ndiyakholelwa ukuba kufanele ukuba ufumane into enje nge-SPY2K3, ngoku uza kundibuza ukuba yintoni ekhethekileyo ngayo. Ewe, impendulo elula yile, ilungile kwiimfuno zakho kwaye ikwanelisa iimfuno zakho zabathengi! Unokuzenza zombini ezi zixhobo, ukonwabisa abantu abangena evenkileni yakho ukuze bathenge into okanye ujonge into onamathele ngelixa ugcina iso lakhe kumntu ngamnye onokuthi abonakalise ukrebe wakho ngayo nayiphi na indlela eyimfuneko. Ke, le khamera yesithethi enobuchule ayinikezi kuphela izandi ezivakalayo kodwa ikwabamba izenzo eziyingozi nezifihliweyo zabasebenzi kuseti olungekho sesikweni nolungacwangciswanga. Umntu unokugcina umkhondo weentlanganiso zebhodi kunye neenkomfa zokufumana izenzo ezimbi zabasebenzi kunye nabasemagunyeni; Le khamera ingumthombo olungileyo wokugcina ubungqina kwiifomati ezibonakalayo kunye neziviwayo. Ungawudlala umculo kwesi sixhobo ngeBluetooth yefowuni yakho okanye yelaptop ngelixa usenza nenqanaba elikhulu lokutshekishwa rhoqo emva komzuzwana yonke imihla!
I-SPY204 -CYLINDER YOKUGQIBELA WIFI CAMERA:
Ngokonyuswa kwengqondo yesaphuli-mthetho, imibutho yezokhuseleko kufuneka iqiniseke ukuba ukhuseleko abalunikezelayo luyamangalisa kwaye luphuculwe ngokunjalo. Uyilo oluqhelekileyo lweCCTV sele luyinto eqhelekileyo kwezi ntsuku kunye nendlela ezihamba ngayo, zinokuchongwa ngokulula ngalo naliphi na iliso eliqhelekileyo ukuze kugcinwe ukutshekishwa kwayo yonke into. Kungenxa yoko le nto kwenziwa i-SPY204, ngoqulunqo lwayo lwe-Cylinder kunye netekhnoloji yokuxhumeka ngaphandle kwamacingo, unokuyibeka nje nakweliphi na ikona nayiphi na indawo nokuba yindawo yokuhlala, iofisi okanye into ethile yomsitho ukubamba umva kwaye uthathe isenzo phambi komntu ade acinge ngokwenza nasiphi na isenzo sobugebenga esingaqinisekanga ngelo xesha. Abayi kwazi nokuba kwenzeke ntoni kwaye babambe xa ugcina iso ngakwintshukumo nganye yabo encinci nale bad bad.
Kwangoko sithethe malunga nendlela ii-router ze-Wi-Fi ezinokusetyenziswa ngokukuko ekufumaneni ababeki bazo ngasese baqinisekise ukhuseleko lwayo nayiphi na indawo ngaphandle kokufunyanwa. Nangona kunjalo, ukuba sinokulwenza lula ngakumbi useluva? Kuthekani ukuba sinokuguqula ikhamera ibe yinto engafane ibonwe abantu abaqhelekileyo soze, kwaye nditsho ukuba ndingade ndikwazi ukuqaphela ukuba babukelwe okanye hayi.? Yilapho i-SPY165 isenza ukungena kwayo. Inekhamera ejikelezayo ye-180-degree ejikelezayo kunye ne-1080p yokurekhoda kweempawu. Ndiyakholelwa ukuba naliphi na isebe lezokhuselo liya kuyifuna le gajethi kwikona abayifunayo kuba le nto inokuqinisekisa ukhuseleko lwayo nayiphi na abathengi okanye abathengi ngaphandle kokufumana amehlo kumntu oqhelekileyo. Baqinisekisa ukuba bobabini umphathi kunye nomphathi osemva kokubeka esweni bobabini bazolile kwaye ngaphandle kwamaxhala!
I-SPY088 -I-WIFI AIR FRESHENER IKHONA YENKAMPANI NENGCULI YOKUVELA:
Udidi lwayo nayiphi na ivenkile, iofisi, okanye indlu eqhelekileyo akufuneki iphazanyiswe xa ufaka umlinganiso wokhuseleko kuyo yonke loo nto. Ndithetha ukuba iingcingo kuyo yonke indawo zijikeleze iikona ecaleni kweekhamera ezijikeleza njengeenyosi aziniki mbonakalo intle kwimiphetho yalo naliphi na igumbi nokuba lelisebe, ivenkile, indlu okanye imall enkulu. Ke, unokwenza ntoni ukuze uqiniseke ukuba ibala lakho libukeka ngokukhethekileyo njengoko linokunika intloko yakho yokhuseleko okanye lowo ujonge yonke le meko inzima? Ilula, fumana le gajethi imangalisayo ye-SPY088. Ngoku isebenza njani? Ngokulula njengoko umntu enokufumana, ngokulula uyixhume nayo nayiphi na ikhompyuter okanye i-laptop oya kubeka kuyo igumbi okanye isiseko sayo kwaye uyenze yenze umsebenzi wayo ngokuchanekileyo njengayo nayiphi na enye ikhamera eqhelekileyo yeCCTV. Le yinto enhle yokugcina iliso kumagumbi amancinci anjengegumbi lokulala, amagumbi amancinci, amakhitshi njalo njalo. Ayizukuyiphazamisa imbonakalo yendawo okwangoku kwaye iya kuhlala ingabonakali njengento enokwenzeka kwaye ngokufanayo, okhuseleko oluhle alungeni emehlweni nangona liqinisekile ukuba uphefumlela kwindawo ekhuselekileyo!
I-SPY175 -I-WIFI POWER BANK CAMERA:
Ukuba ulishishini elihamba kakhulu kunye nabalindi bakhe ngalo lonke ixesha, kodwa woyikiswa ngexesha leentlanganiso zakhe zangasese kunye nezinto, okanye ukuba ungumntu okwindawo apho acinga ukuba anganomntu ozama ukonzakalisa yena kwaye ufuna ukuqiniseka ukuba akukho mntu unenyani yokwenyusa isandla kuye. Leyo SPY175 ilungile nje bhuti kuwe, le gajethi ilapha yikhamera elawulwa yi-Wi-Fi exhasa ikhadi le-SD ukuya kuthi ga kwi-128 gab, inokusebenza nakwimeko eziphantsi kakhulu kunye neerekhodi ezikumgangatho ukuya kwi-4K. Ayisosidenge ke eso! Ngoku awunyanzelekanga ukuba ugcine imicimbi yakho yeshishini yabucala ngokwaneleyo kwizikhuselo zakho. Banokuhlala bakukhathalela ngelixa usegumbini okanye unyawo kude kubo ukuba baqinisekise ukhuseleko lweNqanaba ngaphandle kokukhathazeka. Kananjalo, wonke umntu kufuneka abize umnxeba wakhe kwezi ntsuku ngokuchanekileyo, ngubani onokuba nesibindi sokuthandabuza kwinto efana neebhanki zaMandla?
I-SPY032-WIFELE WIFI SPY HIDDEN IPHOLE CAMERA:
Abanye abantu bayakhathazeka kakhulu malunga nenqanaba lokhuseleko labo, nangona eneekhamera kunye neegijethi ezichaziweyo phaya kuludwe olubangqongileyo. Bafuna umntu othile abenze bazive ngathi bafuna ukuhlala ecaleni kwabo ababonakali. Ngoku ekubeni ubuchwephesha beCloak khange babhengezwe okwangoku ukuze ibe yinto engenzeki ekugqibeleni nangona oko kubhengeziwe kukubhengezwa kwegajethi emangalisayo njenge-SPY032. Le nto incinci iyenziwa kukuba inamathele kuwe njengempahla yakho kwaye iqinisekisa umntu owujonga njengokhuseleko wenqanaba nge-engile nganye anokuyifuna, le nto intle kangaka iza nebhetri enokuthi igcinwe ixhotyisiwe kwaye iqhubeka nokurekhoda ukuya kwi70 yeeyure 'ixesha elifanayo nge-100 iyure yokulinda emhle kakhulu. Le khamera incinci yephinki yinto onokuyifihla naphina phantsi kwehempe yakho okanye into ethile kwaye iya kuthi iqiniseke ukuba unemfihlo epheleleyo kwaye unike u-iso elipheleleyo kuyo yonke into elapha kwindawo apho ujonge khona izinto.!
I-SPY208 -WIFI NETWORK BlUETOOTH Sithethi seCAMERA:
Sikhankanye apha ngasentla malunga nendlela yokugcina ivenkile yokwenyani ukuba ungumntu othengisa umculo ngaphandle kokuphulukana nobume bokuhonjiswa kwayo kunye nesitayile. Nangona uza kuthini ukuba ungumntu ongomculo ongabinayo ivenkile yomculo? Ha-ha, injalo loo nto. Ungakhathazeki, i-SPY208 ingaba yonke le nto ikugubungele? Oku kuyilelwe zombini iinjongo zokuzonwabisa kunye neenjongo zokhuseleko ukuze ukwazi ukuchitha ixesha lakho uqinisekisa ukuba yonke into ihlala iphantsi kweliso lomlawuli ngelixa ugcina ixesha ligcwele ngomgangatho ngokuzonwabisa kunye nomculo wakho owuthandayo! Ngoku yintoni enye enokuba ngcono kunokuba nengoma ichulumancise umtsalane womzimba wakho ngelixa unganyanzelekanga ukuba ubeke izixhobo zokuhlaselwa ngokungekho mthethweni nanjengoko lo mhlobo esiya kuthi anike zonke iinkcukacha ezenzekileyo ezikujikeleze kulo mntu ungene hlawula kwangaxeshanye kunye nekhamera yayo yokurekhoda ye4K yokurekhoda inyani. Yinto encinci egqibeleleyo onokuyisebenzisa naliphi na ixesha ngenxa yokujonga kwayo okulingeneyo kunye nesitayile. Akukho mntu uya kuze acinge ukuba into enje inokusetyenziselwa iinjongo zokhuseleko nangona ijongeka iyonwabisa!